I-Stanolone (DHT) i-powder (521-18-6) Abavelisi kunye nabaNikezeli-mveliso
I-Androstanolone ifana ne-DHT. I-DHT yenziwe ngokubanzi kwiimvavanyo, iinwele zezinwele, i-adrenal gland kunye neprotate gland kwaye iveliswa xa i-testosterone idibanisa ne-enzyme emzimbeni. Esibelethweni, i-DHT ikhuthaza ukuphuhliswa kweempawu zesilisa zesisu nomntwana.
I-powder Stanolone (DHT) emfutshane (521-18-6) ividiyo
I-Raw Stanolone (DHT) powder (521-18-6) Inkcazelo
I-Raw Stanolone (DHT) ye-powder 5, 4-bond bond. I-Dihydrotestosterone ikwaseklasini yeekhampani ezibizwa ngokuba yi-androgens, ezibizwa ngokuba ngama-hormone ne-androgenic okanye i-steroids, ebizwa ngokuba yi-androgen sex steroid kunye ne-hormone. I-agonist ye-androgen receptor (AR). Idlala indima ebalulekileyo ekuzihlukaniseni ngesondo, ukuvuthwa kwe-penis kunye ne-scrotum, iinwele, ukuveliswa kwe-sebum kunye nophuhliso kunye nokugcinwa kwe-prostate gland kunye ne-vesin vesicles. Kusetyenziswa ikakhulu ukunyanga kwe-hypogonadism yendoda, kunye ne-androgen yokuntula kwesifo esibi, kunye ne-androgen yokuntula ukuguga kunye ne-microphallus kwasebuntwaneni.
I-powder Stanolone (DHT) ebomvu (521-18-6)uqobo
Igama lemveliso I powder Stanolone (DHT)
uhlobo Numama Dihydrotestosterone, iDHT
Iqela leziyobisi I-Steroids; abaPhakathi kunye namaChiza amachiza; Amachiza; Steroid kunye neHormone; API
Inani leCAS 521-18-6
I molecular Fi-ormula C19H30O2
I molecular WSibhozo 290.44
IMasaisotopic Mass 290.225 g / mol
Ukuxuba Point 178-183 ° C
Ukubilisa Point 372.52 ° C (uqikelelo olunzima)
I-Biological Half-Life iiyure 8-9
Sukufaneleka Amanzi, i-525 mg / mL (kwi-25 ° C)
Sisibetho Tukushisa RT
Stanolone Aukuguquka Isetyenziselwa ukutshabalalisa isifo esingapheliyo, isifo se-osteoporosis, ukusuleleka kwintsholongwane kunye nokukhathazeka, ukutshisa, njl njl. Kubangelwa ukulinganisela kwe-nitrogen engafanelekanga, ukukhuthaza ukukhula kweintsana ezisanda kuzalwa kunye nokunyanga, njl. Ukuphuka akulula ukuphilisa, ukuxinezeleka kwe-hypercholesterolemia kunye nesemva kwe-postpartum kungasetyenziselwa . Kwaye i-Raw Stanolone powder ingasetyenziswa njengemveliso yezobisi.
Yintoni i-Raw Stanolone (DHT) powder (521-18-6)?
I-Androstanolone, okanye i-stanolone, eyaziwa nangokuthi i-dihydrotestosterone (DHT) kwaye ithengiswa phantsi kwegama le-brand Andractim phakathi kwabanye, i-androgen kunye ne-anabolic steroid (i-AAS) amayeza kunye ne-hormone esetyenziselwa kakhulu unyango lwamanqanaba aphantsi e-testosterone kumadoda. Kusetyenziswa kwakhona ukuphathwa kwebele kunye ne-penis encinane kumadoda. Ngokuqhelekileyo unikezwa njengejel kwisicelo kwesikhumba, kodwa sinokusetyenziswa njengesi-ester ngokujola kwi-muscle.
I-powder Stanolone (DHT) enamandla (521-18-6) Sebenza
Yenziwe ngezenzo ze-enzyme 3-oxo-5-alpha-steroid-4-dehydrogenase. I-Dihydrotestosterone (DHT) iveliswa ngokunciphisa i-5 ye-alpha ye-testosterone. Ngokungafani ne-testosterone, i-DHT ayikwazi ukunqunyulwa kwi-estradiol ngenxa yoko kwaye i-androstanolone ibonwa njenge-androgenic steroid ecocekileyo. I-Dihydrotestosterone (DHT) ibeka i-metabolite esebenzayo ye-hormone testosterone, eyakhiwe ngokuyinhloko kwi-prostate gland, i-testes, iifollic hair, kunye ne-adrenal glands kwi-receptor 5-alpha-reductase ngendlela yokunciphisa i-alpha, i-5-bond-bond. I-Dihydrotestosterone iphethwe yile klasi yeekhemikhali ezibizwa ngokuba yi-androgens, ezibizwa ngokuba yi-androgenic hormones okanye i-testoids. I-DHT icatshangelwa ukuba malunga namaxesha ama-30 angaphezu kwe testosterone ngenxa yokunyuka kwamanani kunye ne-androgen receptor.
I-powder Stanolone (DHT) ye-powder (521-18-6) Isisombululo
I-Stanolone ithengiswa kwikharityhulam yezilwanyana kumazwe athile kwi-20 okanye kwi-50 mg / ml. Amadoda kufuneka athathe malunga ne-200-400mg ngeveki, kwaye iilenki zifuneka kuphela kanye ngeveki.
Abesifazana banokuzama ukusebenzisa i-nandrolones ngenxa yobumnene babo kunye nokuthambekela kwe-androgenic ephantsi. Nangona kunjalo, basese-androgenic, ngoko ke akukho ngaphezu kwe-50 mgs ngeveki ekwacetyiswa ngabasetyhini, kwaye ukuba iimeko zokuhlaziywa zikhona, ukusetyenziswa kwe-laurabolin kufuneka kupheliswe ngokukhawuleza.
I-powder Stanolone (DHT) ebomvu (521-18-6)
I-Androstanolone iyafana ne-dihydrotestosterone yomzimba, njengoko siyazi, yenziwe ngenguqu ye-pertoherone ye-testosterone. Ngoko ke abanye bathi i-Androstanolone i-dihydrotestosterone yokwenziwa. I-Androstanolone inefuthe elikhulu kunye ne-androgenic kwaye, ngenxa yesakhiwo sayo, ayikwazi ukuguqulwa ibe yi-estrogen. Ukuxhobisa ngokukhawuleza kwamandla kunye nobuhlungu besisundu kunye ne-Androstanolone ayinanani elincinci.
I-Androstanolone yayisetyenziselwa ukuncintisana nokuncintisana kwe-stteroid kuba ikuncede ukufumana isidumbu esinzima ngokusebenzisa umgangatho we-fat fat ngokunyusa izinga le-androgen ngaphandle kokunciphisa. Abadlali abaninzi basebenzisa i-Androstanolone ngexesha lokusebenza ukuze i-doping ihlolwe ubuqilima ukususela kwinto ehlala emzimbeni nje ixesha elifutshane kunye nexabiso le-testosterone / epitestosterone alichaphazeli. Enye into efanelekileyo kukuba i-injection version ayinobuthi onobuthi.
Thenga i-Stanolone (DHT) ipowder evela eBuasas
I-Raw Masteron Inanthate (Drostanolone) ipowder (472-61-1)
I-Raw Methasteron (i-Superdrol) ipowder (3381-88-2)